FAMPIASANA INDRINDRA HO AN'NY Virus IgM-IgG ANTIBODY TEST-News-Sinocare
Fampiasana an-tsitrapo ho an'ny fanandramana Virus IgM-IgG ANTIBODY TEST
Fotoana: 2020-06-01 Hits: 284
Ny fanadihadiana solojika dia afaka manampy amin'ny famotopotorana ny valanaretina mitohy sy ny tombana ny tombana amin'ny tahan'ny fanafihana na ny haben'ny valanaretina. Amin'ny tranga izay ratsy ny fitsapana virosy ary misy rohy mahery vaika vIrus ny otrikaretina, ny santionan'ny serum vita amin'ny tsiroaroa (ao anatin'ny dingana maranitra sy maharesy lahatra) dia afaka manohana ny famaritana raha vantany vao misy fitsapana serôma voamarina. Ny santionan'ny serum dia azo tehirizina amin'izany.
Ny fitsapana serology dia mamantatra ny fisian'ny antibodies ao anaty ra rehefa mamaly ny aretina manokana ny vatana, toy ny vIrus. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo fitsapana dia mamantatra ny valin'ny hery fiarovan'ny vatana ny otrikaretina vokatry ny viriosy fa tsy ny mamantatra ilay viriosy mihitsy. Tany am-piandohan'ny aretina raha mbola miorina ny valin'ny hery fiarovan'ny vatana, dia mety tsy ho hita ny antibodies. Ny fandalinana vao haingana dia mampiseho fa ny fe-potoana nampidirana rano an'ny SARS-COV-2 dia efa ho 7-14 andro, ary ny antibody dia mety ho hita manodidina ny 14 andro aorian'ny nanombohana. (ny antony mahatonga ny valin'ny hery fiarovana ao amin'ny vatan'olombelona dia maharitra fotoana iray hamoronana antivirus manokana, raha atao mandritra ny fe-potoana am-baravarankely alohan'ny famokarana antibody ny detection dia mety misy tranga ratsy ratsy).
 Pejy 22, MEDRXIV Navoaka tamin'ny 03,2020 martsa. htps: // doi. org / 10.1101 / 2020.03.02.20030189
Io dia mametra ny fahombiazan'ny fitsapana amin'ny famaritana aretina vIrus, ary izany no antony iray tsy tokony hampiasaina ny fitsapana serology ho fototra tokana hijerena viriosy. Ny fitsapana serolojia dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny ady atao vIrus amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo matihanina amin'ny fahasalamana hamantatra ny isam-batan'olona dia nanangana valiny voaro amin'ny SARS-CoV-2. Ho fanampin'izany, ireo valim-panadinana ireo dia afaka manampy amin'ny famaritana hoe iza no afaka manome ampahany amin'ny rany antsoina hoe «convalescent plasma», izay mety ho fitsaboana mety ho an'ireo izay marary mafy vIrus. Raha misy fepetra, dia tokony hozahana ny tranga ahiahiana ho an'ny fitambaran'ny fitsapana virolojia sy ny serolojia,ary koa nanoratra tomography.
Pejy mialoha: Ny lanonana mamaky ny tetikasa Sinocare iPOCT Industrial Park
Pejy manaraka: Q&A ho an'ny Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip